Making and donating Face Shield 400 to Frontline Volunteers in Hpakant Township – AHRN-Myanmar
Making and donating Face Shield 400 to Frontline Volunteers in Hpakant Township
By AHRN IT — In Activities	— 30/04/2020
ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရှိ Frontline Volunteer များသို့ Face Shield ၄၀၀ခု ပြုလုပ် လှူဒါန်းခြင်း။
AHRN-ဖားကန့်ရုံးနှင့် AHRN-ဆိုင်းတောင်ရုံးတို့မှ ၀န်ထမ်းများ စုပေါင်း၍ Face Shield ၄၀၀ ခုကို ပြုလုပ်ကာ ဖားကန့်မြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မင်းလွင်မှတဆင့် ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရှိ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော Volunteer များသို့ ၂၄-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်းပါသည်။ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် Community Base Facility Quarantine နေရာ ၃၀ တွင် ၂၄-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ Quarantine ၀င်ရောက်နေသူ လက်ရှိ ၆၀၈ဦးရှိပြီး ထိုနေရာများတွင် Volunteer အဖြစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ပေးနေသော တာဝန်ရှိသူများနှင့်ဒေသခံများ ၃၅၀ခန့် ရှိရာ AHRN မှလည်း လိုအပ်သည်များကို ဆက်လက် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။
AHRN-Hpakant ကို Access to Health Fund မှ ပံ့ပိုးကူညီသညျ
AHRN staff from Hpakant and Seng-Taung made 400 homemade Face Shields and donated these to COVID-19 prevention and control volunteers in Hpakant Township via Dr. Min Lwin (Township Medical Officer) on 24th April 2020. There are 608 people in 30 Community Based Facility Quarantine Centers up to 24th April 2020 and around 350 Community volunteers and Government officials undertake work responsibilities in respective camps.
AHRN-Hpakant project is funded by Access to Health Fund.